Saturday July 09, 2016 - 18:20:20 in Maqaallo by Super Admin
Beryahaan dambe waxaa dalka aad uga aloosnaa buuq iyo is qabqabsi ku saabsan qaybsiga kuraasta baarlamaanka federalka. Walaacaas waxaa sabab u ah kalsooni daro iyo shaki laga qabo habka kuraasta loo qaybinayo iyo cidda qaybinaysa oo ah hoggaanka dhaqanka oo soo xulaya xubnaha wax dooranaya iyo hoggaanka maamul oo iyaguna saamayn weyn ku leh hab-socodka doorashada iyo dadka soo baxayaba
Waxaa kale oo jaahwareerka qayb ka ah halbeegyada wax lugu qaybinayo oo aan caddayn. Taas oo keenaysa nin walba inuu is yiraahdo adaa mudan, jifadiisana uu ka dhaadhiciyo in maanta kursiga la isku haysto xaqoodii yahay.
In aynu ka hadalno mawduucaan baahi ayaa loo qabaa,
Ahmiyad weyna wuu leeyahay. Haddii si wacan loo maareeyana shar badan baa lagaga badbaadayaa, wanaag badana waa laga filanayaa. Sharka lagaga badbaadayo waxaa ka mid ah colaada iyo cuqdada kala galaysa dadka ehelka ah, kalsoonida lugu qabo hoggaanka dhaqanka iyo hoggaanka maamulka oo lumaysa, wanaagga lugu gaari karana waxaa ka mid ah in dad jagooyinka u qalma oo ummadda wax tara la soo xulo.
Dabcan hoggaanka dhaqanka iyo hoggaanka maamulkuba waa kala garaad iyo aqoon roonyihiin, waana kala daacadsanyihiin, isla markaasna waa kala hufanyihiin, waana kala geesisanyihiin. Sida ay sifaadkaas ugu kala horreeyaan ayaana beelohoodu u kala xasarad iyo khilaaf yaraanayaan.
Nin siyaasi ah baa ii sheegay in beeshiisu go’aansatay:
1- In uusan kursi helin nin horay u soo qabtay
2- In aan jifo soo martay mar kale loogu celin, kuraasta beeshana hadba jifooyin hor leh la siiyo.
3- In aan kuraastaan loo ogolayn nin meel kale jago ka haya
Qodobadaan in la qaato iyo in aan la qaadan waa isugu kay mid, waxaanse jeclaystay in dadku wax isku ogaadaan. Qodobadaan haddii la qaato waxaa yaraanaya tirada dadka kuraastaan ku loolamaya iyo jifooyinka yaacaya.
Waxaan qodobadaas ugu daray inay samaystaan halbeegyo ay ku kala reebaan ragga badan ee ku hardamaya kursiga jifada la siiyey. Halbeegyada aan u sheegay waxaa ka mid ahaa:
1- In uu leeyahay aqoon ugu yaraan heer jaamici ah
2- In lugu yaqaan ummadda iyo tolka dhexdooda ammaano, karti, ka shaqaynta danta guud iyo sumcad wanaagsan
3- In uusan balwad lahayn
4- In uu aqoon u leeyahay bulshada soomaaliyeed, diinteeda iyo dhaqankeedaba.
Kuraastaani ma deeqdo jifooyinka beeshu ka kooban tahay, mana deeqdo xubnaha beesha ka dhashay ee kuraas doonka ah, xaqiiqa ahaana waa arrin keenaysa in dadku isku maandhaafaan, kuna kala dhintaan. Mar abaari dhacday oo macaawino la qaybiyey ayaa dadkii ku dirireen, kolkaasaa nin abwaan ahi yiri: "Ilaahow waxaan raxmadaada ahaynba waa nooga daraan” . Wuxuu u jeedaa roobka Ilaahay di’iyo nin walba meeshiisa ayuu ka cabbaa, kana daaqaa oo nina iskuma ciriiryo laakiin waxyaabaha aadanuhu qaybinayaan dadka ma deeqaan sidaa darteed ayay ugu kala dhimanayaan.
Gabagabadii ilaalinta xiriirka walaalnimo iyo midnimada beesha ayaa ka muhiimsan kuraastaan lugu qamaamayo oo ninka hela waqtigu ka dhamaanayo isagoo wali hamuuman; sidaa darteed hoggaanka dhaqanka iyo hoggaanka maamulkuba caddaalada ha ku dadaaleen oo yaysan lumen sumcadooda iyo kalsoonida lugu qabo, dadkoodana yaanay sabab ugu noqon burbur iyo cuqdad.
Sh. Axmed Cabdisamad <alwaqaar@hotmail.com